Naked Weapon (2002) ရုပ်သံ/အကြည် - Min Oaker
Movie Naked Weapon (2002) ရုပ်သံ/အကြည်
Naked Weapon (2002) ရုပ်သံ/အကြည်
by Ko Lin on 7:20 AM in Movie
2002 ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးဖိုက်တာဇာတ်ကြမ်းတွေထဲမှာတော့
မင်းသမီး Maggie Q အဓိကပါဝင်ထားပြီး မင်းသားချော Daniel Wu နဲ့အခြားသရုပ်ဆောင်များစွာအားဖြည့်ထားပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေ အမောပြေ ကြည်ရှုနိုင်အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဇာတ်ညွန်းကိုတော့ မရေးတော့ဘူးနော် အမောပြေ ကိုယ်တိုင်သာ ကြည့်ရှု ပါတော့
ဖုန်းသမားတွေအတွက်လည်း ဖုန်းထဲ့ကနေ အလွယ်တစ်ကူ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်၊ ဒေါင်းယူနိုင်ရန် အတွက်လည်း pcloud ကနေ တင်ပေးထားပါတယ်။ 383.1. MB သာရှိပြီး ၊ အကြည်လင်ဆုံး တင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်က Watch Movies ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်....။
A mysterious woman, known as Madame M, kidnaps forty pre-teen girls and transports them toaremote island to train them as the most deadly assassins. CIA operative Jack Chen follows the ... See full summary »
Director: Siu-Tung Ching (as Tony Ching Siu Tung)
Writer: Jing Wong
Stars: Marit Thoresen, Almen Pui-Ha Wong, Daniel Wu | See full cast & crew »
Naked Weapon (2002) ရုပ်သံ/အကြည် ကြည့်ရှုရန်
By Ko Lin at 7:20 AM
ဖုန်းဘေလ် Hack နည်း (1)
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ..................... ဒီနေ့ တော့ hacking ၀ါသနာပါသူများအတွက် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ဂဏန်း code တွေ ကို ထုတ်ပေးတဲ့ c...
ဖုန်းတွေအတွက် market လေးပါ
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ..................... သယ်ချင်းများအတွက် play store ကိုအလွယ်ကူဆုံးဝင်ရောက်နည်းလေးပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနည်းမှာ ma...
Free Fonts 50 Pack6 apk and iFont apk
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ..................... ဖောင့်စတိုင်ကိုလန်းလန်းလေးပြောင်းချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် တကယ်လန...
လိုင်းမမိတဲ့ နေရာရောက်က လိုင်းမိအောင်လုပ်နည်း
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ..................... Smart ဖုန်းတေမှာ လိုင်းဆွဲအား နည်းတဲ့နေရာကို ရောက်သွားရင် intana တပ်ပုံလေးပြလိုက်ထှာ ...